Serbia: Angatahan’ny mpitoraka blaogy ny fametraham-pialàn’ny Minisitry ny Fahasalamana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2010 15:57 GMT
Ekena fa somary kiritika ihany ny tontonlon'ny fitorahana bolongana ao Serbia, fa tato anatin'ny andro andro vitsivitsy dia sahala amin'ny nanjary nanaraka rindran-damina sy lasa manana ny lanjany amin'ny fanehoana ny hevitry ny maro momba ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Roa herinandro teo izay, tantara ratsy iray no vaky masoandro tao Serbia, volana maro taty aorian'ny nisamborana ilay vehivavy maodely Serbiana sady mpandraharaha, Katarina Rebraca, izay mbola vesaran'ny fanenjehana ho nanodikodim-bola azo tamin'ny asany fanaovana asa soa tokony ho nividianana fitaovam-pitsaboana. Hatreto dia enina no olona nosamborin'ny manampahefana noho izy ireo ahiahiana ho tafiditra amin'ilay kolikoly sy fanodinkodinana ny volan'ny Oncology Institute ao Belgrade.
Vreme, gazety Serbiana iray mpivoaka isan-kerinandro, dia nitatitra (SRP tao amin'ny tranonkalan'izy ireo, herinandro lasa izay:
Ny Alarobia 30 Jona, notazonin'ny mpitandro filaminana ao Belgrade i Nenad Borojevic, Talen'ny Oncology Institute, … Ankoatr'izay i Borojevic, Tale mpanampy azy dia voatana, ny Lehiben'ny Sampana Fitsaboana ny aretin-jaza ao amin'ilay toeram-pitsaboana, Zoran Bekic, ary ny lehiben'ny famoaham-panafody ao amin'ilay toeram-pitsaboana, Dr. Ivana Popovic. Mbola vao mainka naha goavana ilay tantara ratsy, telo amin'ireo olona ambony avy amin'ireo orinasa mpamokatra fanafody ao Serbia koa no voatazona…
Ny tranga dia nahatonga azy ity ho fanta-bahoaka amin'izao misy azy izao dia maneho fa nisy fakàm-bola tsy araka ny tokony ho izy hita nivandravandra avy amin'ilay Toeram-pitsaboana tonga hatramin'ireto orinasa ireto, izany hoe n y dikany dia volabe tsy hita noanoa no naloa miohatra amin'izay tena nilaina hahazoana ireo cytostatiques fampiasa amin'ny Cimiothérapie. Ny fanontaniana mipetraka, na izany aza, dia ny hoe nisy tokoa ve ny fanabontsinana ny vola fandoa, mahatonga azy ho trangana fanodinkodinana iray hafa, na nisy tokoa ny fividianana fanafody cytostatiques amin'ny fatra betsaka, ary naterina sy tena nomena ireo marary tao amin'ny Oncology Institute.
Tomica Milosavljevic, Minisitry ny Fahasalamana Serba, dia mandà ny mety ho fisian'ny fanomezana izany fanafody izanyho an'ny marary amin'ny fatra mihoatra izay nofaritan'ny mpitsabo ao amin'ny Institute ary ny marary rehetra dia notsaboina mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena azo ekena amin'ny sehatry ny fitsaboana.
Blic, gazety Serba mpiseho isan'andro iray, dia nitatitra fa taorian'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety niarahana tamin'i Milosavljevic tamin'ny 06 Jolay:
Milosavljevic dia nanamarika fa ireo mpanara-maso dia, tamin'ny alalan'ny fomba fandraisana ‘tsy ankifidy’, dia nandinika tahirin'antontan-taratasim-pitsaboana an'ireo marary notsaboina tao amin'ny Institute nanomboka ny taona 2003 hatramin'ny taona 2010 ary tsy nahitàna taratra tsy fetezana na tsy fahaiza-mampihatra ny fitsipiky ny fitsaboana.
Mazava loatra, ny vahoaka Serba dia tsy afa-po tamin'ity fanadihadiana tampoka natao ity sy ny fanomezan-toky avy amin'ny Minisitra noho ny tsy fisian'ny porofo mivaingana na fanazavana momba ilay olana nomena.
Koa satria efa nipoaka ihany ny tantara ratsy, dia nisy fandraisan'andraikitra nataon'ireo Serba mpitoraka blaogy vitsivitsy. Tsy hoe fotsiny nanao fanangonan-tsonia anaty aterneto ity vondron'olona kiritika ity nangataka ny mba hametra-pialàna avy hatrany ny Minisitry ny Fahasalamana, fa mbola nanokatra blaogy vaovao izay mitondra indrindra ny lohateny hoe Fametraham-pialàna (Ostavka), manamafy fa tofoka tanteraka”ireo vahoaka tezitra ao Serbia”.
Ilay fanangonan-tsonia dia mivaky toy izao (SRP):
Ireo vahoaka tezitra eto Serbia dia mangataka ny Minisitry ny Fahasalamana, Tomica Milosavljevic, mba handray ny andraikiny amin'ny tantara ratsy tsy mbola fandre sy ny tsy fahaiza-mitantana ny indostrian'ny fahasalamana ka hametraka fialàna…
Tsy dia niditra loatra tamin'ny fametraham-pialàn'ny Minisitra izay nandrasana akory ilay fanangonan-tsonia, na izany aza. Ny hatezerana dia toa tahaka ny niainga avy any amin'ny vahoaka ihany ary dia nanaraka sisa ny fiarahamonin'ny fitorahana blaogy. Tanatin'ny iray herinandro latsaka monja, ampolony ireo lahatsoratra am-blaogy sy matoan-dahatsoratra voasoratra mikasika ilay ventin-kevitra, maro ireo mangataka ny fametraham-pialàn'ny minisitra. Vondrona maromaro misy ny mponin'ny aterineto no nifamotoana naneho fanoherana nanoloana ny Ivontoerana, namela hafatra sy teny faneva (SRP) tamin'ireo tranoben'ny governemanta sy teny anivon'ireo toeram-pitsaboana natao ho an'ny sarambabem-bahoaka.
Isan'ireo voalohany nitatitra ny fangatahana fametraham-pialàn'ny Minisitra ny iray tamin'ireo nandrehitra ny fandraisan'andraikitry ny “mpitoraka blaogy mitambatra”, Ivana Momcilovic. Mba hanentanana bebeb kokoa ny fanoherana ataon'ny olona, Ivana dia nanoratra ao amin'ny blaoginy (SRP) fa ny Minisitry ny Fahasalamana Serba dia nitondra an-tanana ny fametraham-pialàny androany, tsy afaka hisedra ela ny tery vaimantan'ny vahoaka. Na dia tsy mbola misy fanamafisam-baovao momba ny fametraham-pialàna aza, na ny mpitoraka blaogy, na ny mponina dia samy manantena eo ampiandrasantsika ny fihaonana manarakla amin'ny mpanao gazety hataon'ny Minisitra na mpikambana hafa ao amin'ny governemanta. Ivana, fantatra kokoa eo amin'ny fitorahana bloagy ao an-toerana amin'ny hoe Charolija, dia nanambara teo aloha teo fa izy dia manantena ireo Serba mpitoraka blaogy sy ny vahoaka hanohy ny fanerena ny governemanta hangataka ny fametraham-pialàn'ilay Minisitra ary mako no manantena fanadihadiana lalina momba ilay olana raha nisy ny fividianana fatra tafahoatra ho an'ny Oncology Institute sy , raha izany tokoa, inona no fepetra efa noraisina momba izany.